miiska kooban Tani horumar leeyihiin AutoCAD 2013 ku saabsan isbedelada ay soo sheegeen AutoDesk in qoraalkii ugu dambeeyey (AutoCAD 2012, 2011 iyo 2010) Waxaa cad in kuwani waa horumar la taaban karo in AutoDesk ayaa sheegay, qaar ka mid ah, kuwaas oo wax laga badalay ama la wanaajiyey versions kale iyo sidoo kale qaar ka mid ah muuqaalada iftiin ...
Plex.Earth download images ka Google Earth Ma sharci darada ah?
Waxaan horay u aragnay barnaamijyo qaar ka soo dejiyey sawirada Google Earth. Dhiirigelinta ama maya, qaar qaarna ma jiraan sida StitchMaps iyo GoogleMaps Downloader. Maalintii kale ayaa saaxiib i weydiiyay haddii Plex.Earth ay ka timaado AutoCAD ay jabisay siyaasadaha Google. Waa maxay shuruudaha Google http://earth.google.com/intl/en/license.html (c) ...
Waxaan doonayaa inaan bilaabo markaan caddaynayo inaanay ahayn mid la mid ah CAD-da bilaashka ah ee CAD ah laakiin labadaba waxay ku jiraan raadinta ugu badan ee Google ee la xidhiidha CAD-da. Iyada oo ku xiran nooca isticmaalaha, sawirka aasaasiga ah ayaa ka fekeraya helitaanka helitaanka iyada oo aan la siin lacag bixinta ama jahwareerka burcad badeedda iyo ...
Kaliya seddex maalmood ka hor intaan 2011 dhamayn, waxaa la ii oggolaaday in aan la xiriiro ugu yaraan labadan munaasib oo isbedelaya nolosheena 2012: 1. Microsoft wuxuu iibsanayaa Bentley Systems. Sida aad u maqli karto, Microsoft waxay gaartay heshiis kama dambeys ah si loo soo saaro Bentley Systems oo ku salaysan Bentley Infrastructure 500; lambarka ...
Qaar ka mid ah casriyadaha aan ku aragno qaybta beta ee AutoCAD 2013 wacitaankan version Jaws wuxuu noo sheegayaa waxa isbedelka aan arki doonno bisha Abriil ee sanadka 2012, marka si rasmi ah loo bilaabi doono; inkastoo aan si qunyar ah u soo dhicin waxa cusub ee AutoCAD 2012. Laga bilaabo bilawga wargeyska hore loo yaqaan: qaab cusub oo dwg 2013! Maxaa ...
GeoCivil waa blog xiiso leh oo loo isticmaalo qalabka CAD / GIS ee aagga dhismaha madaniga. Qoraaga, qof ka soo jeeda El Salvador, ayaa tusaale wanaagsan u ah hanuuninta fasallada dhaqameed ee ay u socdeen - bulshooyinka barashada onlineka ah; Xaqiiqdii waa guul muhiim u ah ...
AutoCAD-AutoDesk, aragti ugu horeysay
Microstation waxaa lagu magacaabaa unugyada (unugyada) inkastoo mararka qaarkood aan maqlay in sidoo kale loo yaqaanno unugyo. Maqaalkani waxaan arki doonaa sida loo sameeyo iyo caqligalka oo ka dhigaya inay ka duwanyihiin xayndaabka AutoCAD. 1 Si aad u isticmaasho unugyada Si ka duwan SIG, halkaasoo calaamadu ay tahay mid firfircoon ...
Waxaa la sifeeyay sifooyinka in version cusub ee PlexEarth keeno, kaas oo la filayo in lagu dhawaaqo dhammaadka October ee 2011. Sababta ugu weyn ee sababta qalabkani uu aqbalay aqbalaad weyn waa in ay xalliso waxa CAD-da ugu caansan (AutoCAD) ee adduunka oo aan samayn karin ...